10 အများဆုံးထူးထူးဆန်းဆန်းအပါအဝင္ျစပိန် | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ရထားခရီးသွားစပိန် > 10 အများဆုံးထူးထူးဆန်းဆန်းအပါအဝင္ျစပိန်
စပိန်အတွက်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းနှင့်တက်ကြွသောမီးရထားဘူတာရုံ၏နံပါတ်ရှိပါသည်. သငျသညျကိုတှေ့လိမျ့မညျ အရှိန်အလွန်မြန်သော, အလတ်စားအကွာအဝေး, ဒေသဆိုင်ရာ, မြို့ပြနှင့် ဟိုတယ်-ရထား တိုင်းပြည်တစ်လျှောက်လုံးခရီးသွား. ကြီးမားသောခေတ်သစ်ဘူတာကနေဝိုင်းရံသေးငယ်သူတို့ကို သဘာဝ, ဤအရာများသည် 10 စပိန်ရဲ့အများဆုံးစိတ်ဝင်စားဖွယ်ဘူတာရုံ၏.
ဘာစီလိုနာ, စပိန် (Sant ရထားဘူတာ)
ဒီခေတ်သစ်ဘူတာရုံတစ်ခုပါ အလုပ်အများဆုံးရထားဘူတာရုံ ဘာစီလိုနာမှာ. ဒါဟာနှစ်ဦးစလုံးအတွက်အဓိကမီးရထားဘူတာရုံဖြစ်ပါသည် အမျိုးသားရေးနှင့်နိုင်ငံတကာ ရထားဆက်သွယ်မှု. ဤသည်ဘူတာရုံမျှမျှတတကြီးမားသောနှင့်မြို့လယ်အတွင်းတည်ရှိသောဖြစ်ပါသည်. ဒါဟာနှစ်ဦးစလုံးအသုံးပြု ဒေသခံတွေ နှင့် ခရီးသွားဧည့် နှင့်စပိန်ကိုဖြတ်ပြီးအများဆုံးရထားဘူတာနှင့်တကွသင် connect ပါလိမ့်မယ်.
မက်ဒရစ် (Puerta က de Atocha ရထားဘူတာ)
ဤသည်ဘူတာရုံမက်ဒရစ်အတွက်အကြီးမားဆုံးဖြစ်ပြီးနှစ်ပေါင်းများစွာန်းကျင်ခဲ့သည်. ဒါဟာဖြစ်ပါသည် လှပသောဘူတာရုံ နှင့်အများဆုံးစိတ်ဝင်စားဖွယ်ရထားဘူတာရုံများထဲကတစ်ခု, ကြောင်းအထဲမှာအဆင်းလှသောအပူပိုင်းဥယျာဉ်တော်နှင့်လိပ်သန့်ရှင်းရာဌာနရတာဟာ. အပေါ် မတ်လ 11, 2004, ယခု 11-M အဖြစ်စပိန်အတွက်လူသိများတစ်နေ့, 191 ကလူဗုံးခွဲမှုတစ်ခုစီးရီးအတွက်သေဆုံးခဲ့သည်. သူတို့ကဒီဘူတာရုံနှင့်အနီးအနားမှာနှစ်ဦးစလုံးလေးခရီးသည်ရထားထဲမှာဖြစ်ပွားခဲ့သည်.
ဆီဗီလာ (စန်တာ Justa ရထားဘူတာ)
စန်တာ Justa စပိန်အတွက် Third-အလုပ်အများဆုံးဘူတာရုံဖြစ်ပါသည်, တကျိပ်နှစ်ပါးသောပလက်ဖောင်းတစ်ဦးစုစုပေါင်းနှင့်အတူ. ဒါဟာရှိနေပြီးအခြားနိုင်ငံရဲ့အကြိုက်ဆုံးသန့်ရှင်းသူတို့၏တဦးတည်းအပြီးအမည်ပေးထားသည်ကို (စန်တာ Rufina ၏နှမ). အဆိုပါအဆောက်အဦးရှိနေပြီးအခြားနိုင်ငံရဲ့မြို့လယ်၏အရှေ့ပိုငျးတှငျတည်ရှိသည်. စင်ကြယ်တည်ဆောက်နှင့်ဒီဇိုင်း၏မြို့ရဲ့ခေတ်မီအစီအစဉ်ဥပမာတစ်ခုဖြစ်ကြောင်း 1991.
Ronda စပိန်အတွက်အလှဆုံးမြို့များကိုတစ်ဦးဖြစ်ဟု. စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရထားဘူတာရုံများ၏ဤစပိန်ရွေးချယ်မှုဒီပြဖြစ်ပါသည်, နှင့်ဆက်ဆက်တစ်ဦးမဖြစ်မနေ-တွေ့မြင်. အဆိုပါဘူတာရုံပြန်တည်ဆောက်ခဲ့ 1892, သို့သော်, ဒါဟာနှစ်ပေါင်းများစွာအတွင်း updated နှင့်အံ့သြဖွယ်ထိန်းသိမ်းထားခဲ့ပြီး. အဆိုပါဘူတာရုံနေဆဲသော်လည်းက "Anglo-" သို့မဟုတ်ကိုလိုနီခေတ်ကအိန္ဒိယကိုကြည့်ရှိပါတယ်. အဆိုပါသစ်သား-fringed မြတ်သောကပ်လျက်ပလက်ဖောင်း spanning ဘို့သံတိုင်ပေါ်ထောက်ခံနေသည်.
Puebla က de Sanabria ရထားဘူတာ
ဤသည်ဘူတာရုံ Zamora ၏လှပသောအဟောင်းများကိုမွို့၌တည်ရှိသည်. ဒါဟာဒေသတွင်းနှင့်ရိုးရာဗိသုကာကြောင့်ဖြစ်သောကြောင့်အက၎င်း၏လှပမှု၏စပိန်အတွက်အကျော်ကြားဆုံးရထားဘူတာတစ်ခုဖြစ်တယ်, slate rooves နှင့်အတူ, ashlar ကျောက်များနှင့်တစ်ဦးကြီးတွေအလယ်ပိုင်းမဟာဥက္ကဋ္ဌ. ဤသည်ဘူတာရုံကိုလည်းချိတ်ဆက်မှုအဖြစ် Ruta de la Plata အပေါ်ခဲ့ဆက်စပ်မှုအဘို့အကျော်ကြား အစက်အပြောက်.
ဤသည်ဘူတာရုံ Castile နှင့်လီယွန်အတွက် Zamora ၏မြို့တွင်တည်ရှိသည်နှင့်အစဉ်အဆက်ကိုဖန်ဆင်းအရှိဆုံးစိတ်ဝင်စားဖွယ်ရထားဘူတာရုံများထဲကတစ်ခုဖြစ်စဉ်းစားသည်. ၎င်း၏ဆောက်လုပ်ရေးအတွက်ရပ်တန့်ကြရသည် 1929 ထိုသို့နောက်ဆုံးတော့ခုနှစ်တွင်ပြီးစီးခဲ့သည် 1958. ဒါဟာနှောင်းပိုင်းတွင် Gothic အဘိဓါန်စတိုင်လ်တစ်ခုသတိပေးချက်ဖြစ်ကြောင်းအသေးစိတ်အချို့သည်အတူ captivating Renaissance လှုံ့ဆော်မှုရှိပါတယ်. ဒါဟာတကယ်ကိုအသက်ရှူ-ဆည်းပူးနေဖြစ်ပါတယ်.
Estacion del Norte ရထားဘူတာ
ဤသည်မီးရထားဘူတာရုံစန်း Sebastian မြို့တွင်တွေ့နိုင်ပါသည်, နှစ်ဦးစလုံးရာပူဇော်သက္ကာကိုအဆင်းလှသောအရပ်ဌာန မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ပင်လယ် နှင့်တောင်ကြီးတောင်ငယ်အမြင်များ. ယင်းပလက်ဖောင်းဖုံးအုပ်ထားသည့်မြတ်သောပြင်သစ်အတွက် Eiffel မျှော်စင်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲသူအလွန်တူညီလူတစ်ဦးသောသူသည် Gustave Eiffel ကဒီဇိုင်းခဲ့သည်အတိုင်းဤဘူတာရုံသူ့ဟာသူအတွက်ဆွဲဆောင်မှုဖြစ်ပါသည်.
Canfranc Estacion ရထားဘူတာ
စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရထားဘူတာရုံများ၏ဤစွန့်ပစ်ရွေးစပိန်နဲ့အကြားနယ်စပ်တလျှောက်တွင်တွေ့ရှိနိုင်ပါသည် ပြင်သစ်. ဒါဟာအတွင်းဖွင့်လှစ်ထားခဲ့သည် 1928 နှင့်၏ "တိုက်တန်းနစ်ဟုအမည်ပေးထားသည့် တောင်တန်း."ဒါဟာနှစ်နိုင်ငံအကြားကုန်သွယ်ရေးမြှင့်တင်ရန်တည်ဆောက်ခဲ့ပေမယ့်ထိန်းသိမ်းမခံခဲ့ရပြီးနောက်ကတည်းကစွန့်ပစ်လျက်ရှိသည် 1970. အဆိုပါဘူတာရုံယနေ့အပိုင်းပိုင်းကျဆင်းနေသည်. ခရီးသွားဧည့်နေတုန်းပဲဒါကြောင့်သူ့ရဲ့တစ်နေ့တာအတွက်ဘယ်လောက်ခမ်းနားတဲ့အကြံအစည်တွေ့မြင်နိုင်ကြသည်. ပိုများသောစပိန်ခရီးသွားဧည့်ချိန် မှစ. ထို site သွားရောက်ခဲ့ကြသည် 2013. ဒါဟာပွင့်လင်းခဲ့စဉ်ကာလအစဉ်အမြဲဘူတာရုံလည်ပတ်ခဲ့သူကလူများ၏အရေအတွက်သည်ထက် ပို..
Estacio del Nord မီးရထားဘူတာရုံ
ဤသည်ဗလင်စီယာ၏မြို့အတွက်အဓိကမီးရထားဘူတာရုံဖြစ်ပါသည်. ဒါဟာအတွက်တည်ဆောက်ခဲ့ 1917 နှင့်ဥရောပမော်ဒန်ဗိသုကာ၏သင်္ကေတဖြစ်လာခဲ့သည်. ဒါဟာကြီးမားတဲ့နာရီနှင့်ဗဟိုမှာရှိတဲ့ရွှေလင်းတပန်းပုနှင့်အတူကြီးမားတဲ့အဆောက်အဦးဖြစ်ပါတယ်, ယနေ့ဘူတာရုံ၏အများဆုံးကိုယ်စားလှယ်ဒြပ်စင်အချို့ကိုအရာများမှာ. စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရထားဘူတာရုံများ၏ဤရွေးလည်းယဉ်ကျေးမှုစိတ်ဝင်စားမှုတစ်အဆောက်အဦစဉ်းစားသည်.
ဤသည်ဘူတာရုံကဂျီဘရောလ် 100 တန်အမြောက်များ၏အကွာအဝေးထဲကဖြစ်ခဲ့ဓိပ်ပာတဲ့သမိုင်းဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်ကြောင့်ဆိပ်ကမ်းကနေ Algeciras နှင့်အနည်းငယ်ကီလိုမီတာ၏အထက်ပိုင်းတွင်တည်ရှိသည်. ဤသည်ရထားသွားရောက်ချင်ပါတယ်သူတွေကိုအသုံးပြု ဂျီဘရောလ်၏ရော့ခ်. ပထမဦးဆုံး၌ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည် 1982 ဆဲဟောင်း-ကျောင်းကိုကြည့်ရှိပြီးအဲဒါကိုခံစားရတယ်.
ယနေ့စပိန်အတွက် operating သူတို့ထဲကအတော်များများရှိပါတယ်နေစဉ်, ဤအရာများသည် 10 သွားရောက်ကြည့်ရှုဖို့စပိန်နိုင်ငံရဲ့အများဆုံးစိတ်ဝင်စားဖွယ်ရထားဘူတာ၏. မီးရထားခရီးသွားလာ၏ကြီးမားသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည် အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ချောချောမွေ့မွေ့ဘုတ်အဖွဲ့ကိုဖြတ်ပြီးတိုင်းပြည်နှင့်ပြေးအတွက် system ကို. အတော်များများရှိပါတယ် လှပသောနေ့ကခရီးစဉ် လည်းပဲ Over-ညဥ့် Adventures ရထားခဲ့နှငျ့သငျစပိန်သို့သွားရောက်သည့်အခါကရထားလမ်း၏အသုံးပြုမှုကိုသင်၏လုပ်နေချိန်မှာတန်ဖိုးရှိဖြစ်ပါတယ်ခံရဖို့.
ဥရောပအကောင်းဆုံးနှင့်စျေးအသက်သာဆုံးလက်မှတ်တွေကိုရှာပါ တစ်ဦးကရထား Save, ကြာသည်3မိနစ်ယခုရထားလက်မှတ်ဘွတ်ကင်ဖို့ တစ်ဦးရထား Save. စပိန်အတွက်အများဆုံးစိတ်ဝင်စားဖွယ်ဘူတာရုံမှ, အပါအဝင်အားလုံးလူကြိုက်များငွေပေးချေမှုနည်းစနစ်များ အသုံးပြု. ငွေပေးချေ, ခရက်ဒစ်ကဒ်နှင့် Paypal.
သင်သည်သင်၏ site ပေါ်တွင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလော့ဂ်ပို့စ် embed လုပ်ဖို့ချင်ပါနဲ့, ထို့နောက်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/10-fascinating-train-stations-spain/ - (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အောက်ကိုဆင်း
သင်သည်သင်၏အသုံးပြုသူများမျိုးဖြစ်လိုလျှင်, သင်တို့သည်ငါတို့၏ရှာဖွေရေးစာမျက်နှာများသို့တိုက်ရိုက်သူတို့ကိုပဲ့ပြင်နိုင်ပါတယ်. ဒီလင့်ခ်, သင်တို့သည်ငါတို့၏လူကြိုက်အများဆုံးမီးရထားလမ်းကြောင်းများရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ် – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. သငျသညျအင်္ဂလိပ်ဆင်းသက်စာမျက်နှာများတွင်ဘို့ငါတို့လင့်များရှိအတွင်းပိုင်း, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့လည်းရှိ https://www.saveatrain.com/es_routes_sitemap.xml သငျတို့သ / က de သို့မဟုတ် / ကြောင်းနှင့်ပိုပြီးဘာသာစကားများဖို့ / es ပြောင်းလဲနိုင်သည်.
europeantravel ရထား ဘူတာရုံ ခရီးသွား travelspain
ရထားခရီးသွားခြင်း, ရထားခရီးသွားဂျာမနီ, ဥရောပခရီးသွား
4 သင့်ရဲ့ Instagram ကို Shine Make ရန်မီးရထားလမ်းကြောင်း Views စာ
ရထားခရီးသွားခြင်း, ရထားခရီးသွားနော်ဝေး, Train Travel စကော့တလန်, ရထားခရီးသွားဆွီဒင်, ရထားခရီးသွားလာဆွစ်ဇာလန်, ခရီးသွားလာရေးသိကောင်းစရာများရထား, ဥရောပခရီးသွား
ဥရောပနှင့်အတူနယူးရထား Links များအာရှ
12345678910111213141516171819202122232425262728293031 သြဂုတ် 2020စက်တင်ဘာ 2020အောက်တိုဘာ 2020နိုဝင်ဘာ 2020ဒီဇင်ဘာ 2020ဇန်နဝါရီ 2021ဖေဖော်ဝါရီ 2021မတ်လ 202121ပြီ ၂၀၂၁မေလ 2021ဇွန် 2021ဇူလိုင်လ 2021
7 ဥရောပ၌အဆိုပါ Beaten Path ကို ဦး တည်ရာကိုချွတ်
ထိပ်တန်း5ဥရောပတွင်အလုပ်အများဆုံးရထားဘူတာ
SubmitForm ကိုတင်သွင်းလျက်ရှိသည်, နည်းနည်းစောင့်ဆိုင်းကျေးဇူးပြုပြီး.